Fampisehoana momba ny raharaham-barotra
Natsangana ny sampana Fitaovana Gaoyi vaovao!
1. Ho an'ny drill rock vao novidina, noho ny fepetra fiarovana amin'ny fonosana, dia hisy menaka anti-harafesina ao anatiny. Aza adino ny manala sy manaisotra azy alohan'ny hampiasana azy, ary mitsoka fangaro amin'ny faritra mihetsiketsika rehetra rehefa miverina. Alohan'ny hanaovana ny asan'ny sm ...
Ny orinasa vaovao misy anay ao amin'ny faritra teknolojia Gao yi Hi, avo telo heny noho ny orinasa antitra, zoro famokarana 2 noho ny orinasa taloha, miaraka amin'ny fitaovana vaovao sy fitaovana ary afaka manome fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa bebe kokoa. Ny pick dia karazana pnômatika iray izay ampiasaina betsaka amin'ny fitrandrahana ind ...
Drum dia nilalao isan'andro isan-taona amin'ny andro fanokafana ny orinasa taorian'ny fialantsasatry ny fetin'ny lohataona ary efa lasa fivoriambe any Qihong, manondro asa tsara eo amin'ny mpikambana ao amin'ny qihong. Nivoaka ny hetsika rehefa nanomboka ny orinasa, amin'izao fotoana izao isika dia ao anaty trou ...